Meksiko - Gpedia, Your Encyclopedia
Gobolada Midoobay ee Meksiko
"Astaanta Qaranka Meksiko"
Caasimada Meksiko city
- Taakiikh 16 Sebteembar, 1810
- Total 1,972,550 km2 km²
- Biyo (%) 2.5
- 2010 qiyaas 112,322,757
- Total $1.205 trillion
- Per capita $10,550
Meksiko (Mexico) ama Gobolada Midoobay ee Meksiko Af-Isbaanish Estados Unidos Mexicanos waa wadan ku yaalo, Woqooyiga Ameerika, waxoona xuduu la leeyahay, wadamada Mareykanka, Guatemala, iyo Belise, galbeedka neh waxaa kaga dhagan, Badweynta Baasifik, bariga neh, Gacanka Meksiko iyo badda karabiya. Wadankaan waxaa looga hadlaa luqada af isbaanishka oo ah luqada rasmiga oo looga hadlo.
Waayadii hore Meksiko waxee eheed meesha ee ku badnaayeen dadka indianka ah gaar ahan Dadka Maya iyo asteker.Guushii oo ka gaaray Gumeestihii Isbanishka dadka astekerka ah taariikhda marka ee eheed 1521, waxaa wadanka meksiko u bilaawday gumeeysigii yurubiyaanka. shacabka meksiko waxee weeydiisan jireen xornimo taasi oo isku badashay dagaal aad u dheer oo dhamaaday waqtigii ee xornimada heleen taariikhda marka ee eheed 1821. Marka ee meksiko xornimada ka heshay isbaanishka wadanka meksiko tartiib tartiib oo u yaraaday. Dhulka Woqooyiga meksiko waxaa laga geday ama ka qaateen ajaaniibta mareykanka, waa marka oo meesha ka bilaawday Dagaalkii Mareykanka iyo meksiko. 1860kii wadanka waxaa joogay ama ka talinjiray ciidamo ka socdo dalka Faransiiska, waxaana wadanka ka saaray ciidamada meksiko oo hogaaminaayay madaxweynihii Benito Juárez. Xukunkii dheeraa ee Porfirio Diaz' waxoo dhaliyay kacaankii meksiko oo dhacay 1910.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Meksiko&oldid=191726"